Huawei ga-ekwupụta Huawei P30 Pro New Edition na ọrụ Google | Gam akporosis
Companylọ ọrụ China na-akwadebe ọkwa nke Huawei P30 Pro New Edition nke ahụ ga-abịa na ọrụ Google ma nye ndị ọrụ ohere iji ngwa Google ndị ahụ dị mkpa maka ọtụtụ akụkụ ndị a.
Anyị amatalarị nsogbu niile dị maka Huawei na enweela nkwarụ site na enweghi ike ịmalite igwe ya ya na ọrụ gugul Ebe dị anya ka dị anya karịa, mana ọ pụtaghị na ụlọ ọrụ ndị China na-achọ ụzọ iji nwee ike ịnye igwe ya ndị mara mma na ndị ọrụ nọ na West.
N'ezie, ọ chọtara obere ihe ọ ga - eme n'oge na - adịbeghị anya jiri Google Play Services na ekwentị ha. Kpọmkwem mgbe ị na-emelite ụdị P30 Lite na akara ngosi New Edition.
Mụbara RAM na nchekwa dị n'ime nke P30 Lite, ma ugbu a ị dịla njikere ime otu ihe ahụ na P30 Pro. Ọ bụ site na Huawei Germany site na mkpọsa ederede site na ebe a na-atụ anya ịmalite ụdị Huawei P30 Pro New Edition ọhụrụ naanị n'ime izu abụọ.
Ekwentị, na gịnị ga-adị site na Mee 15 ruo June 14, ga-agụnye Ọrụ Google. Ekwesịrị ikwupụta na anyị na-eche ihu ekwentị ikpeazụ nke arụ ọrụ Google. Ihe anyị na-amaghị bụ njirimara akụrụngwa na akụkụ ya ga-emelite. Anyị nwere ike ịghọta na ọ bụrụ na Lite version e ụba RAM na nchekwa, ihe niile akwusila si na-ahapụ a Huawei ekwentị a obere emelitere na nke anyị nwere ike iji ngwa dị ka Google Maps ma ọ bụ Duo.
Anyị ga-ahụ Otu Huawei si mee ihe mejupụtara Huawei P30 Pro New Edition a Ma ọ bụrụ na emelitere ama ama na ihe niile mere ka ndị China mara amara ga-enyere gị aka; ebe anyi matara ihe ikpeazụ nke P Smart 2020.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Huawei P30 Pro New Edition ga-enwe ọrụ Google
Ngwa Google Ozi karịrị nbudata 1.000 nde